Njem njem nleta Cayman Islands: Roadzọ laghachi na 500K Ikuku Ikuku
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Cayman Islands » Njem njem nleta Cayman Islands: Roadzọ laghachi na 500K Ikuku Ikuku
Akụkọ mkpakọrịta • Njem azụmahịa • Akụkọ Cayman Islands • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Njem njem nleta nke Cayman na-ebupụta atụmatụ 'Backlaghachi na 500K Air Arrivals'
Ndị ọrụ njem njem Cayman Islands enwewo nsogbu na ụdị dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme ya, site na ọdachi ndị na-emere onwe ha, ndalata akụ na ụba ụwa, na ọgba aghara ụwa; ma gosipụta nnwale nke dugara mgbake na ọganiihu n’ọdịnihu. Ugbu a, site na mwepụta nke Mịnịsta na Ngalaba nke njem nlegharị anya atụmatụ atụmatụ njem nlegharị anya nke akpọrọ The Road Back to 500K (RB5), e setịpụla ụkpụrụ maka mbịaghachi nke njem njem ka mba ahụ na-aga na nke ọhụrụ na ọkwa - ụwa nke njem.
Onye isi oche ndị isi na Minista maka njem nleta, Mr. Moses Kirkconnell, malitere RB5 taa. Ebumnuche a ga - abụ isi ihe dị mkpa site na isi ihe nke National Tourism Plan (NTP) 2019 - 2023. Emechiri NTP na February nke afọ a, tupu mmalite nke nzaghachi ọrịa na agwaetiti Cayman nke kwụsịrị arụmọrụ njem na March. Agbanyeghị, e mebere RB5 na NTP na otu ebumnuche bụ isi: iji duzie ndị njem n'ụzọ gara nke ọma, n'enweghị nsogbu, n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na nkwado, ugbu a na n'ọdịnihu
RB5, nke etolite site na mmekorita ya na ndi oru aka ndi oru aka, ndi oru ochichi na nyocha ahia di omimi, choputara uzo ato kachasi mkpa nke gha eduzi ndi oru njem nleta na nloghachi ya dika ogidi nke aku na uba Cayman Islands. Usoro mgbake nke njem a na-ekwu banyere ụzọ iji kwụsie ike azụmaahịa; mepụta ohere maka ndị ọrụ njem njem napụrụ iche; ma mepụta atụmatụ maka afọ abụọ na atọ na-esote, na-elekwasị anya n'ihe anọ dị mkpa:
Ntughari maka njikere: Chọpụta ihe ịma aka ndị dị ugbu a ma zụlite usoro kachasị mma iji megharịa mpaghara ndị njem na arụmọrụ na nloghachi dị irè iji bụrụ ogidi kachasị elu nke akụ na ụba.
Kpalie aku na uba n’ime obodo: chọpụta usoro iji mee ka obodo ahụ nwee mmetụta dị mma site na njem nlegharị anya ụlọ dị ka agwaetiti Cayman gafere site na usoro nke Covid-19 nsogbu na mgbake.
Weghachi obi ike zuru ụwa ọnụ na ahịa ahịa: Azụmaahịa zuru ụwa ọnụ na nkwalite nke omume na usoro kachasị mma etinyebere iji hụ na ngwaahịa na ọrụ ndị njem na Cayman Islands na-arụ ọrụ na nchekwa nchekwa na ịdị ọcha kachasị elu maka ebe obibi, ihe omume, ịmị njem, njegharị na ebe nkiri, njem, na ahụmịhe nri.
Bolster Future Tourism Sector Ọrụ: usoro mmegharị a ga-azụlite nkọwa ọhụụ nke ọrụ dị n'ime ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere mweghachi mkpa nke ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị iji gbanwee ụzọ ọhụrụ eji arụ ọrụ na ahịa ndị njem.
“Azụmahịa nke njem bụ mpaghara a na-apụghị ịgbagha agbagha agbagha, gụnyere plethora nke ụlọ ọrụ ndị na-adabere na njem ndị njem yana ndị na-eri nri na ụlọ ọrụ ahụ site na ọrụ dịgasị iche iche,” ka Hon. Onye ozi Kirkconnell. “Ekwenyesiri m ike na atụmatụ RB5 na-enye ụzọ kachasị mma maka iji nweta mgbake akụ na ụba nke nwere nzube ga-ahụ mba ahụ nwayọ nwayọ laghachi na afọ dị mkpa nke ịdekọ ihe ndekọ na njem nleta. A ga-emezu nke a na usoro nke na-agụnye ịmepụta ohere maka ndị Caymanians ka ha bụrụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ndị njem anyị, na-anabata ohere iji weghachite ndị ọrụ site n'aka ọtụtụ ndị na-enye ikike ikike ka ha nwee ezigbo ndị Caymanian zụrụ nke ọma na-enyefe ndị ahịa Caymankind ọrụ. a maara anyị dị ka ebe ndị Caribbean. Anyị ahụwo ihe isi ike kpatara ihe karịrị 1,500 Caymanians bụ ndị raara ndụ ha na ibi ndụ ha nye ụlọ ọrụ a, ọtụtụ n’ime ha chere nsogbu akụ na ụba na-enweghị atụ ihu ozugbo emere mkpebi siri ike imechi ókèala anyị. Ọ bụ ọrụ dịịrị anyị ugbu a ịchụpụ mbọ dị ka RB5 na NTP iji wepụta elele nke atụmatụ mmepe njem a pụrụ iche nke ọma bụ ụzọ nke ga-aga nke ọma ogologo oge.
Mgbe ndị Minista na Ngalaba Na-ahụ Maka Njem Nleta na-eduzi, usoro niile na mmepe nke RB5 gụnyere ndụmọdụ na imekọ ihe ọnụ na gọọmentị na ndị ọrụ onwe ha iji hụ na atụmatụ ahụ nwere mmetụta sara mbara na nke zuru oke maka ndị bi na Cayman Islands na obodo ndị njem. Nke a gụnyere:
Nyocha nke ngalaba maka nzaghachi akụ na ụba ụlọ
Nzukọ na ebe obibi, mmiri mmiri, na mpaghara ebe nkiri
Nzukọ na Cayman Islands Tourism Association na Chamber of Commerce
Mmekọrịta na Transportgbọ njem Ọha na Ọha na Liclọ Akwụkwọ Ikenye Nkwado na ịkwado ụlọ ọrụ ndị njem
Guidelineszụlite usoro idebe ihe ọcha maka mpaghara ndị njem iji nabata ndị ọbịa n'udo
Na-elekwasị anya n'ụzọ ga-aga n'ihu iji mepee ụlọ ọrụ ahụ ka usoro mepee, RB5 na-enye usoro a na-achịkwa, nke a na-achịkwa, na-akọwapụta usoro kachasị mma, usoro iwu na usoro ọhụụ, yana echiche dị oke mkpa nke ga-eduzi Ministri na Ngalaba nke Njem Nleta, ụlọ ọrụ gọọmentị, na ndị niile metụtara njem na ihe ịga nke ọma.